တမြို့လုံးနည်းပါး ပျက်စီးသွားခဲ့ရသော ဘေရွတ် - Yangon Nation News
တမြို့လုံးနည်းပါး ပျက်စီးသွားခဲ့ရသော ဘေရွတ်
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅,၀၀၀ ကတည်းကပင် အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့ပြီး ဖိုနီရှန်း ခေတ်၊ ဟယ်လင်စတိုင်းခေတ်၊ ရောမခေတ်၊ အလယ်ခေတ် နှင့် အော်တိုမန် အင်ပိုင်ယာ ခေတ်များကို အဆက်ဆက် ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရကာ ပြင်းထန်လှသည့် ဆယ့်ငါးနှစ်ကြာ ပြည်တွင်း စစ်ပွဲကြီး (၁၉၇၅-၉၀) ကာလများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အကျယ်အဝန်း ၇.၆ စတုရန်းမိုင် ရှိ ဘေရွတ်သည် ယခုအခါ မိနစ်ပိုင်း အတွင်း မြို့လုံးကျွတ် နည်းပါး အပျက်အစီးများစွာ ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။
ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်း (ပုံတွင် တွေ့ရစဉ်) ရှိ မီးရှူးမီးပန်းများနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာပြု လုပ်ရာတွင် သုံးသည့် အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ်များ သိုလှောင်ထားသည့် ဂိုဒေါင်တခု အနီး မီးစွဲလောင် ခံရသဖြင့် ပေါက်ကွဲထွက်သွားခဲ့သည့် အသံကြီးအား မိုင် ၁၂၀ အကွာ မြေထဲပင်လယ်အရပ်ရှိ ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သော ဆိုက်ပရပ် ကပင် ကြားခဲ့ရသည်။ ပြင်းအား တီအင်တီ ယမ်းတန်ချိန် ၂,၂၀၀ ခန့်နှင့် ညီမျှသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ် တန်ချိန် ၂,၇၅၀ အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ဂျော်ဂျီယာ မှ မိုဇမ်ဘစ် သို့ ထွက်ခွာလာသည့် MV. Rohsus ကုန်တင်သင်္ဘောသည် စက်ချို့ယွင်းလာသဖြင့် ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်းတွင် ဝင်ရောက် ဆိုက်ကပ်စဉ်အတွင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ဂိုဒေါင်ထဲ ထည့်ကာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လက်ဘနွန် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး မိုဟာမက် ဖာမီက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ဘနွန် အကောက်ခွန်ဌာနမှ သိမ်းဆည်းထားသော အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ်များအား မည်သို့ မည်ပုံ စွန့်ပြစ်ရမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးသို့ ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၇ အတွင်း ခြောက်ကြိမ်တိုင် စာရေးတင်ပြခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အကောက်ခွန်ဌာနမှ တင်ပြသော အကြံပေးချက်များထဲတွင် စစ်တပ်သို့ လှူဒါန်းရန်လည်း ပါရှိခဲ့သည်။ သို့သော် တရားရုံးမှ အရေးတယူ လုပ်၍ အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။
သို့သော် သိမ်းဆည်းခံ MV. Rohsus သင်္ဘော ကက်ပတိန် ဖြစ်သူနှင့် လွတ်လပ်သော ဥရောပ အသံတို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ မိမိသင်္ဘောသည် မည်သို့မျှ ချို့ယွင်းချက် မရှိပဲ ပိုင်ရှင်မှ ဆိပ်ကမ်းကြေး ပေးရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့်သာ သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆိပ်ကမ်းတခုလုံး ရစရာ မရှိအောင် ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး မြို့လယ်ရှိ ရှော့ပင်းစင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်၊ လူဂုဏ်တန် ရပ်ကွက်များရှိ အိမ်များ၊ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကိုပင် ခံနိုင်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးများ ပြိုလဲ ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည်။ အသေအပျောက်နှုန်းသည် ယခုအချိန်အထိ ၁၃၅ ယောက် ရှိနေသည်။ ဒဏ်ရာရသူ ၅,၀၀၀ ခန့် ရှိနေသဖြင့် ဘေရွတ်ရှိ ဆေးရုံများ မနိုင်မနင်း ဖြစ်လာနေပြီး ဆေးရုံရှေ့ ကားရပ်နားရန် နေရာများတွင်ပင် တဲများထိုးကာ သွေးလှူဒါန်းမှုကို လက်ခံရယူနေရသည်ဟု သိရသည်။
အိပ်ရေး ပျက်နေသော မျက်လုံးများနှင့် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကာ ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေသော ဘေရွတ် မြို့လူထု သည် လမ်းများပေါ် ထွက်လာနေကြပြီး ပျံ့ကြဲနေသည့် ဆိုဖာများ၊ ပရိဘောဂများ၊ မှန်ကွဲစများ၊ သံတန်းကြီးများ၊ အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များ အကြားတွင် ပျောက်ဆုံးသူများကို လိုက်လံရှာဖွေခြင်း၊ ပြိုလဲနေသော ၎င်းတို့၏ အိမ်များထဲမှ အဖိုးတန် ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက် ရှာဖွေ ယူငင်နေလျှက် ရှိနေသည်။ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များကလည်း အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များအကြား တူးဆွရှာဖွေနေကြဆဲ ဖြစ်သဖြင့် အသေအပျောက်နှုန်းသည် ထပ်မံ မြင့်တက်လာဖွယ် ရှိနေသည်။
လောလောဆယ်တွင် ဈေးဆိုင် အများအပြား ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အပြင် ပုံမှန်အားဖြင့် စားကုန် ၈၀% ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေရချိန်တွင် ဆိပ်ကမ်း ပျက်စီးသွားမှုကြောင့် အစားအသောက် နှင့် အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်း များ ပြတ်လတ်လာဖွယ် ရှိနေပြီး လက်ဘနွန် အစိုးရမှ နှစ်ပတ်ကြာ အရေးပေါ် အခြေအနေကြေငြာထားသည်။ အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ်များ သိုလှောင်ထားမှုတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေသူများ အားလုံး အား လိုက်လံရှာဖွေပြီး ၎င်းတို့အိမ်များတွင်ပင် အကျယ်ချုပ်ထားရှိခဲ့သည်။
အားလုံးမှာ ပြည်တွင်း စစ်ပွဲကြီး ပြီးကတည်းက အာဏာကို ခွဲဝေ အုပ်ချုပ်နေကြသည့် မာရွန်နိုက် ခရစ်ယာန်များ၊ ဒရုဇ် နှင့် ဆွန်နီ မူဆလင် နိုင်ငံရေးသမားများ၏ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများ အပေါ် လက်ညိုးထိုး လာခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။ လက်ဘနွန်တွင် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကျင့်သုံးနေသော်လည်း သမ္မတသည် ခရစ်ယာန်၊ ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဆွန်နီ မူဆလင် နှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဌသည် ရှီးရိုက် ဒရုဇ်၊ ဒုဝန်ကြီးချုပ် နှင့် ဒုလွှတ်တော် ဥက္ကဌသည် အရှေ့တိုင်းအော်သိုဒေါ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ရမည့်အပြင် အထက်တန်း ရာထူးများကိုလည်း ထိုနည်းဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ပေးထားသည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်တွင် လက်ဘနွန် အစိုးရသည် တန်ဘိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံရှိ ယူရို ငွေချေး စာချုပ်များ အား ပြန်လည် ပေးဆပ်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဒေဝါလီ ခံရလုနီး အခြေအနေသို့ ရောက်နှင့်ပြီး ဖြစ်နေသည်။ အစိုးရ တင်ရှိနေသော ကြွေးများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် ပြည်တွင်း ဘဏ်များမှ ထုတ်ချေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရသည် ကျဆင်းလာနေသော ၎င်းတို့၏ ငွေကြွေး ပေါင် တန်ဖိုး ကို အဖတ်ဆယ်နိုင်ရန် ငွေများ ချေးယူပြီး ကျားကန်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
ကိုးကား၊ ၊ AP / The Economist / The New York Times
ယန်လိမန်း Li-Meng Yan (သို့မဟုတ်) Covid ကိစ္စမှာတရုတ်ဘက်ကနေ အမေရိကန်ဘက်ပြေးလာသူ